Dowladda Soomaaliya oo dooneysa in ay gacan ka geysato xalinta xasaradda ka taagan Ukraine « AYAAMO TV
Dowladda Soomaaliya oo dooneysa in ay gacan ka geysato xalinta xasaradda ka taagan Ukraine
610 Views Date March 6th, 2014 time 5:21 pm
War-saxaafadeed ka soo baxay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa looga hadley xaaladda ka taagan Dalka Ukraine, kadib markii ciidamo taageersan dalka Ruushka ay la wareegeen gacanka Crimea ee dhulka Ukraine.
War-saxaafadeedka oo loo qoryey si geesinimo leh ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalku si dhaw xaaladaas ula socoto ishana ugu hayso.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtey in in ay si xoog badan u taagersan tahay in la dhawro xuduudaha iyo madaxbanaanida Ukraine.
Dowladda federaalka ayaa ku baqdey in sida ugu dhakhsiyaha badan loo geeyo Ukraine korjoogayaal la socda xaaladda kuwaas oo ka socda Beesha Caalamka, gaar ahaan Gobolada Bariga iyo Crimea.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Somaliya hoosta ka xariiqeyso haddii ay sii socoto ku xadgudubka madaxbanaanida Ukraine iyo xuduudaheeda in ay khatar ku tahay nabadgeluayada caalamka, taas oo saameyn ku yeelan doonta maqaamka Ruushka uu maanta caalamka ka taagan http://www.montauk-monster.com/pharmacy yahay.
Haddii aan nahay Soomaali si fiican ayaan u naqaanaa sidii khilaafyada caynkaas oo kale ah loo xaliyo, waana wada hadal si nabadgelyo ah ku dhisan iyo dib u heshiin, waxaana diyaar u nahay in aan gacan ka geysano arrima halkaas ka taagan si loo xaliyo ayaa ugu danbeyntii lagu yiri War-saxaafadeedka.
War saxaafadeedkan ayaa imaanaya labo maalmood kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu ka guddoomey warqaaha Safiir horey uga shaqeyn jirey Itoobiya oo Ruushku u soo magacaabeen Soomaaliya.
Inkasta oo Soomaaliya lagu tilmaami jirey Qaran khasarey kadib markii astaan kasta oo Dowladnimo dhulka la dhigey, Dowladdana ay ugu yeeri jireen midda taagta daren ee sida dhalada ah oo kale ee dhulkeedi ciidamo shisheeye ku waardiyeeyaan ayaa war-saxaafadeedkan muujinayaa muruqa iyo cudduda diblomaasiyadeed ee Dowladdu la soo baxdey marba haddii ay dooneyso in ay gacan ka geysato waxa ka taagan Ukraine.